Leak ke nuklia Power Plant nchegbu mgbe Japan Ala Ọma Jijiji
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Leak ke nuklia Power Plant nchegbu mgbe Japan Ala Ọma Jijiji
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • News • Safety • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Japan nwere akụkọ ihe mere eme nke nnukwu ala ọma jijiji. Onye ọzọ kụrụ mba ahụ n'abalị ụnyaahụ. Akụkọ banyere ebe ezoro ezo n'otu ụlọ ọrụ nuklia na-echetara ọdachi na-agbawa obi afọ iri gara aga.
Ala ọma jijiji siri ike na Japan afọ 10 mgbe oke mbibi tsunami na 2011
7.3 siri ike, ala ọma jijiji ahụ na-akọ obere mmebi
Mgbapu n'ulo nuklia na ike iwepu oku bu nchegbu ndi mbu
Ala ọmajiji ahụ ruru 7.3 dị nso na Fukushima n'abalị Satọdee 11.04 nke ehihie oge mpaghara Fukushima na-ewe izu ole na ole tupu emume ncheta nke iri nke ala ọma jijiji na Machị 10, 11 nke bibiri ebe ugwu ọwụwa anyanwụ Japan.
Ala ọma jijiji ahụ ahụla ọtụtụ ndị merụrụ ahụ ma kpalite ọkụ eletrik zuru ebe niile. Somefọdụ ụlọ 950,000 enweghị ikike na mbụ, gọọmentị gwara netwọkụ akụkọ mpaghara NHK.
Ọ dịkarịa ala mmadụ iri na abụọ merụrụ ahụ, dị ka akụkọ sitere n'aka ụlọ ọrụ mgbasa ozi Kyodo. O nwebeghị ndị ọrụ gọọmentị enyela ịdọ aka na ntị tsunami.
Agbanyeghị, ihe ka ọtụtụ banyere ya bụ akụkọ banyere ihihi na Fukushima Daini Nuclear Power plant, dị ka onye mgbasa ozi ọha na eze bụ NHK si kwuo - ọ bụ ezie na ndị nwe ụlọ ọrụ ahụ agọnahụla nke a.
Mmiri ọdọ mmiri ejiri maka ichekwa mmanụ ọkụ nuklia mebiri nwere ike ịgbapụta ma merụọ mpaghara gbara ya gburugburu, npụpụta ahụ kwuru.
Agbanyeghị, akụkọ na-egosipụtakwa ihe ọghọm nye ndị ọrụ na mpaghara gbara ya gburugburu dị obere dịka ọkwa radieshon abụghị oke egwu.
Akụkọ ahụ gara n'ihu na n'ihe dị ka elekere 1.40 nke ụtụtụ Sọnde oge mpaghara: "A chọpụtabeghị nnukwu ihe ọgbaghara na Fukushima Daini Nuclear Power Plant, na enweghị mgbanwe na ụkpụrụ nke ngalaba nyocha ndị na-atụle ogo radieshon gburugburu ụlọ ọrụ nuklia.